Aqoonkaab Maxaa sababa timo daadashada ? | Aqoonkaab
Maxaa sababa timo daadashada ?
Jul 18, 2016Caafimaadka
Madaxa qofka wayn wuxuu leeyahay ugu yaraan 100,000-150,000 waxaana maalin kasta dhunta ilaa 100 kamid ah timahaas. Koritaanka timaha ee qofku wuxuu lee yahay isbadal joogto ah oo kuxidhan da’da qofka, xanuun, iyo qodobo kale.
Khuburada caafimaadku ilaa hada ma cadayn sabbata dhabta ah ee ka danbaysa tima daadashada balse waxaa jira qodobo badan oo loo sababayn karo timaha oo daata.
Cadadka dhecaanka Hormoonka androgens oo kordha wuxuu sababaa bidaarta ragga.
Dawooyinka qaarkood way sababaan tima daadashada sida kuwa loo isticmaalo dawaynta cudurka kansarka sidoo kale dawooyinka lagu yareeyo cadaaadiska dhiiga way sababi karaan sida dawooyinka lagu yareeyo dhlmada ayaguna way sababi karaan.
Habka difaacs jirku wuxuu ka qayb qaadan karaa tima daadashada waliba wuxuu sababaa nooca loo yaqaan alopecia areata.
Isqurxinta badan way kaqayb qaadataa daadashada timaha. Shaamabada oo si xad dhaaf ah loo isticmaalo, iyo noocyada kale ee timaha lagu qurxiyo waxay qayb wayn ka qaataan tima daadashada hadii si xawli ah loo isticmaalo.
Waxaa jira xaalado caafimaad oo keeni kara tima daadashada sida, nafaqa darada, thyroid disease, cuntada oo si khaldan loo cuno, somkorowga, dhiig la,aanta. Dhamaan xaaladahaas iyo kuwo kaloo badan waa kuwo keeni kara tima daadashada balse maahan khasab inay keenaan.
Xuquuqda :baro caafimaad
Previous PostTaariikh kooban oo ku saabsan sooyaalka Youtube Next PostAdobe premiere cc 2015